Ogaden News Agency (ONA) – Maxaad ka fahamtay Afduubka Xubnaha JWXO – u fiirso 3ex Sawir oo kaaga muuqanaya !
Maxaad ka fahamtay Afduubka Xubnaha JWXO – u fiirso 3ex Sawir oo kaaga muuqanaya !
Posted by ONA Admin	/ February 13, 2014
Marka laga yimaado xanuunka siyaasiga ah iyo midka wada-dhalasho iyo mid aadminimo ee ka soo gaadhay dhamaan xubnaha JWXO afduubkii loogu gaystay xubna qaali ku ahaa ururka tadobaadyadii la soo dhaafayNairobiiyo Guriceel, waxaan kala dhex bixi karnaa fal-dambiyeedka sawir muujinaya xaaladda uu ku sugan yahay Gumaysiga iyo adeegayaashiisa Somalida ah.
Ugu horeyn waxba waxbaa lagu xasuustaaye arinta JWXO iyo Somalida dhex taala qofka dhagaysta labada wareysi ee Gudoomiyaha Guriceel iyo Afhayeenka JWXO, waxay soo xasuusin qisadii Nabi Luud iyo qawmkii loo diray dhex martay. Sawir murugo leh ayuu Quraanka ka sheegaa xaaladii ay ku sugnaayeen Nabi Luud CS iyo Qawmkii loo diray. Markay ka diideen inay joojiyaan falkan foosha xunee ay aadanaha u horseedeen, oo hadaanay joojinin u keeni doona dabar go’ooda maadaama uu joogsanayo tarankoodii dabiiciga ahaa, ayuu wuxuu ku calaacalay أليس منكم رجل رشيد .. Miyuuna idinku jirin qof wax garanaya? Markaad dhagaysato jawaabaha xubnaha iyo madaxda JWXO iyo siday Somalida u hadlayaan waxaa kugu soo dhici inaad dhahdo, miyaanu idinku jirin qof wax garanaya oo arka Itobiya waxay idinla maagan tahay? Laakiin Ilaahay SWT isagoo uga faaloonaya Rasuulka CS Qawmkii Nabi Luud wuxuu ku yidhi; لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون Noloshaadan ku dhaartaye (Muxamadow) waxay ku indha la’yihiin baadinimadooda. Shaki kuma jiro inay waxyaaba badan ka indha la’yihiin kuwaa u adeegaya gumaysiga Itobiya ee lasoo taagan kuna faanaya inay Itobiya u shaqaynayaan oo maslaxadooda ay ku jirto inuu qof uu garanayo oo Somali ah, oo muslim ah u gacan galiyo gumaysigii uu la dagaalamayay. Hadaan intaa ku dhaafno kooxahaa ku indhala’ sakhraanimada ay moodayaan inay tahay maslaxad, oon uga gudubno inaan wax ka tilmaano xaaladda Gumaysiga iyo adeegayaashiisa ay ku sugan yihiin ee afduubka ka dhacay Nayrobi iyo Guriceel laga fahmi karo.
Sawirka 1aad – Waxaad arki kartaa markaad kala fahamto farqiga u dehxeeya -Waan soo qabanay iyo Wuu isa soo dhiibay -. Midka 1aad wuxuu muujinayaa awood cadawga uuleeyahay, midka kalena wuxuu muujinayaa in qofka ama xubinka la leeyahay wuu isa soo dhiibay aan loo xoog sheeganin, oo awood qasabtay aanay jirine uu iskii u yimid. Hadaba Itobiya waxay dooratay midka dambe, sabab ayaana ku kaliftay ee ma’aha mid doorsha la’aan ku timid. Sababtoo ah dawladaha, gaar ahaan kuwa gumaysiga ah ee doonaya inay u muujiyaan awooda ciidankooda shucuubta ay gumaystaan waxay doortaan marwalba inay dhahaan waan dilnay, waan soo qabanay, waan burburinay iwm. Marka ay dawladaha gumaysiga ah u maara waayaan shacabka halgamaya oo ciidanka Jabhadda la loodin kari waayo, ayay adeegsadaan maal iyo gorgortan iyo dacaayad, iyadoo midkii lasoo afduubo ama meel loogu dhoonto lagula gorgortamo inuu ku furto naftiisa ama ku qaato maal iyo jago –Waan isa soo dhiibay dheh – taasoo ujeedada ka dambaysa ay tahay in kuwa maqan la tuso oo la yidhaahdo –Hebel waa yimid ee adiguna kaalay – maadaama uu ka quustay gumaysiga awood uu ku soo qabto ama uu kaga adkaado. Halkaa ayay mareysaa awoodii Itobiya maanta. Iska daa qaar la hubo inay ONLF yihiin oo cadawga loo soo dhiibaye, qaar aan waligood noqonin ONLF ayay Itobiya kula gorgortmaysaa oo maal badan kaga qaadanayaan inay tagaan Jigjiga oy dhahaan waxaan ahayn ONLF soo xarootay. Wararka dhabta ah een ka helayno Adisababa iyo Jogjiga, waxay sheegeen in la haysto Cabdi iley iyo jananka ku naaxay laaluusha uu siiyo cabdi iley (Abraha) oo lagu fahmay beentii ay maalaayiinta doolar ku qasaariyeen ee kolba ay lahaayeen ONLF intii ugu dabaysay shalay ayay soo xaroodeen.
Sawirka 2aad ee kuu muuqanaya waa tartanka u dhexeeya Cabdi iley iyo qayb ka mid ah maamulada Somaliya. Cabdi iley isagoo dabasocda dhalanteedkii uu ka iibiyay Itobiya ee ahaa ONLF waan soo xareaynayaa, ayuu ku dhawaaqay inay isa soo dhiibeen Abaanduuliihii ciidanka ONLF – waxay u qoreen sidan; Waxaa xalay saqbadhkii magaalada Jigjiga soo gaadhay Abaanduulihii ciidanka Jabhada ONLF Muxumad Anni, sida uu noo xaqiijiyay qof indhihiisa ku arkay markuu magaalada soo galay. Sidoo kale waxaa arrintaasi shir uu shaqaalaha u qabtay ka sheegay Cabdi Iley shalay galab. (Xogtashacabka)
Warkaa markuu baxay waxaa ishayn kari waayay oo u arkay in xaqiisii la duudsiyaya. Gudoomiyaha degmada Guriceel oo durbadiiba lahadlay idaacada VOA-da inay wareysato oo ; ” .. sheegay in maamulkooda uu ka qabtay gudaha gobolka Galguduud saddex xubnood oo ONLF ka tirsan ayna gacanta u geliyeen dowladda Itoobiya. (HOL)
Heerkaa aadka u hooseeya ayay maanta mareysaa umadii Somaliyeed. Inuu qof sheeganaya masuuliyad uu kula tartamo cabdi iley kuna faano waxaan qabtay oon Itobiya u dhiibay qof Somali ah, isagoon xeerinin uamadnimada ka dhexeysa iyo diintiisa toona.
Sawirka 3xaad ee kuu muuqanaya waa culumada joogta Nairobi ee hormuudka ay ka yihiin Sh. Umal, Shibli, iyo Shakuul oo ilaa hadda aan ka hadlin afduubkii loo gaystay masuuliin ay garanayaan inay yihiin muslimiin (waa hadaanay horey u gaalaynin) oo masaajidda kula tukan jiray. Aamuskaa oo u dhigma inay raali uga yihiin Itobiya falkan jariimada ah ay ka fulisay Nayrobi waa mid taariikhda lagula xisaabtami doono oo aduun iyo aakhiraba aanan ka hadhi doonin. Tolow maxay kaga jawaabi doonaan Xadiithka Rasuulka CS ee ah;
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلماً ، ستره الله يوم القيامة
Hadaanay isdabaqaban. Ilaahay haka sifeeyo qalbigooda wixii ku jira ee xiqdi ah.
Ugu dambayn, waxayna labana isku diideynin maanta oo cadawga iyo saaxiibka halganka shacabka S.Ogadenya ay wada qirayaan in Itobiya ay aad isugu taxlujinayso dacaayadda (propaganda), oo malaayiin doolar ay galisay inay abuurto been aan jirin oo si sahlan u wada fashilmay.
Guusha xaqlaha ayaa leh.
السلام عليكم. ‏waxan halkan tahniyad iyo bogadin an hawada u marinaya, ruxa so qoray maqalkan qimaha iyo qayaha badan e ad qaliga u ah. waxan leyahay. ilahay khayr haka abaal mariyo. ‎